Ubunewunewu bomntu omnye okanye isibini
Isiseko sokurenta: Indlu epheleleyo okanye indawo yokuhlala Inani lamagumbi okulala: 1; Inani lamanye amagumbi aneebhedi: 0 Inani lamagumbi okuhlambela: 1 Uya kuyithanda ifulethi ngobukhulu bayo, ixabiso layo, kwaye ngakumbi indawo yayo I studio ibanzi kwaye ikhanyise kakuhle ngebhedi ephindwe kabini kunye nethuba lokuhlalisa abahambi abane. .
Igumbi lokulala elivaliweyo elineebhedi ezinobukhulu bokumkanikazi kwigumbi ngalinye kunye negumbi lokuhlala elikhulu elinesofa ekhululekileyo yokukhupha i-sofa kwigumbi ngalinye, ineWasher/isomisi sokukhanya kwelanga, Imo yomoya, iTV, iWiFi. Ikhitshi elinazo zonke izitya, iimbiza, iipani, umatshini weKofu.
Kufuphi kakhulu ukusuka kwiBala Lemidlalo, kwigadi yeBotanical, iPlanetarium, ithiyetha, uMdlali odumileyo weCinema kunye nentengiso, i-15 min ukusuka edolophini kwaye le ndawo ithandekayo enelanga inokuba yeyona ndawo ingcono onokufumana kuyo.
Yonke into ifakiwe: i-flat screen TV, ikhebula, ukufudumeza kunye namanzi ashushu, amandla e-intanethi yesantya esiphezulu.Ilinen yebhedi kunye neetawuli zibonelelwa kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.Isomisi seenwele, isinyithi kunye nentsimbi, njl.Ukupaka kwamahhala kwisitalato.
Yonke into ifakiwe: i-flat screen TV, ikhebula, ukufudumeza kunye namanzi ashushu, amandla e-intanethi yesantya esiphezulu.Ilinen yebhedi kunye neetawuli zibonelelwa kunye nekhitsh…